Amathuluzi Okugaya Idayimane Lensimbi, Amaphedi Okupholisha Idayimane Leresin - Idayimane le-ZL
Zonke izinhlobo zama-discs ensimbi okugaya idayimane, zingafakwa kuhlu olubanzi lwezigayi zaphansi ngokuxhuma okuhlukile.
Ulayini ogcwele wamaphedi okupholisha idayimane le-resin afaka amaphedi e-resin amanzi nawomile, amaphedi esikhashana, amaphedi okupholisha amakhona namakhona njll.
Ama-PCD okususwa kwe-coating;Izando ze-Bush zokudala ukuphela kokuhlobisa noma okungasheleli phansi kukakhonkolo ngaphandle kokususwa kwe-coating.
Amasondo enkomishi agibele i-engeli grinder ukuze kulungiswe indawo;amasondo okugaya ama-grinders afana ne-Blastrac, i-Klindex njll.
I-Z-LION 16KP ye-resin yedayimane puck yokupholisha i-co...
I-Z-LION ingxenye ye-rhombus ephindwe kabili ye-trapezoid...
I-Z-LION ingxenye yebhokisi eliphindwe kabili likakhonkolo we-trapezoid...
Ithuluzi le-PCD lokugaya ukhonkolo le-Lavina floor gri...
I-Z-LION Iphedi lokupholisha likakhonkolo elinelungelo lobunikazi lokumanzi ...
Isibambi sephedi ye-Redi Lock ye-Husqvarna floor ...
Iminyaka engu-19+ Yokuhlangenwe nakho Ekwenziweni Kwamathuluzi Edayimane;
63 Yamalungelo Obunikazi Angaphakathi Namazwe Ngamazwe;
5 Iyunithi Yokuqamba Esezingeni Lemboni;
100+ Imibukiso emhlabeni wonke;
Amaphrojekthi we-OEM angama-20+ avela kubaholi Bemboni.
Jabulela ukulethwa kwethu okusheshayo
Imikhiqizo efanelekayo kuphela
Hlala unesibopho ngemikhiqizo yethu
sicela usishiyele umyalezo futhi sizokuthinta phakathi namahora angama-24.
Ikhodi yesitoko: 831862
Meyi 18, 2022
Meyi 12, 2022
Meyi 04, 2022
Ephreli 27, 2022
Ephreli 21, 2022